Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana
Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold momba ny tantaram-piainana
LB dia manolotra tantara iray momba ny fiainana feno momba ny lalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; 'Misotroa'. Ny tantaran'i Danny Drinkwater Child plus tantara tsy marina momba ny tantaram-piainana dia mitondra fitantarana feno momba ny hetsika mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny analysis dia misy ny tantaram-piainany talohan'ny laza, ny fiainam-pianakaviana ary ny tranga tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny momba ny asany manao fahaiza-manao fa ny mpankafy vitsy ihany no mihevitra ny tantaram-piainan'i Danny Drinkwater izay mifandray bebe kokoa momba ny ray aman-dreniny, ny rahalahiny, ny anabaviny ary ny fiainany sns. Tena mahaliana ny fiainany ivelan'ny toerana. Amin'izao fotoana izao tsy misy adieu intsony, aleo manomboka.
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Voalohandohan'ny fiainana
Daniel Noel Drinkwater dia teraka tamin'ny andro faha 5T of March, 1990. Teraka tany Manchester, Royaume-Uni, avy amin'ny ray aman-dreny sy Mrs Drinkwater.
Nandany ny fahazazany i Danny tao Greater Manchester. Mpankafy ny United izy ho toy ny zazakely. Nanomboka nilalao baolina izy nandritra ny vanim-potoanan'ny 4. Niharihary ny fivoarany ary izany dia nitarika ny akademia tao Manchester United izay nahazo azy. Ary mbola zazakely izy.
Ianao, tsy nanao ny ekipa voalohany ho an'i United izy Alex Ferguson.
Izy dia solon'anarana tsy ampiasain'ny lalao Premier League tamin'ny Hull teo anoloan'ny fandresena farany tamin'ny 2009 Champions League tany Barcelone.
Noraisiny ny fametahana Loans tao Huddersfield, Watford, Cardiff sy Barnsley talohan'ny nanasoniavany ny Leicester tamin'ny Janoary 2012. Ny ambiny, araka ny filazany, dia tantara.
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Momba ny anarany
Ny anarana hoe Drinkwater dia avy amin'ny teny hoe 'drink' sy 'rano'. Anaram-batana nomena an'ireo olona tsy afaka mamokatra labiera ao amin'ny 1066 AD Ny voalohany dia hita tao Cheshire
toerana nisy azy ireo. Izany dia talohan'ny nanafihan'ny Vikings an'i Angletera.
Araka ny AncestryUK "Tany amin'ny Moyen Âge Moyen Âge dia ny fisotroan-drivotra manerantany teo amin'ireo kilasy mahantra, ary mora toy izany ny ho mamo toy ny rano, fa ny fisian'ny rano ihany no nisalasala. Ny anaram-pianakaviana angamba angamba anaram-bosotra nomena ny mpihatsaravelatsihy iray na ny lazaina fa tsy mety na tsy te-hividy labiera, na mety ho nomena tamim-pitandremana ho an'ny tompon'ny tranombarotra na ny mpilalao marika. "
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Tena tian'ny Media sosialy
Tsy mahagaga raha lasa adala ny media sosialy satria nanjary nalaza ny anarany nandritra ny fotoanany tao Leicester. Nandritra ny fisotroan-toaka tao amin'ny lalao an-dalan'i Leicester tamin'ny Tottenham, Ny rano fisotro dia nampisongadina rano fisotro. Nahitana hatezerana tao amin'ny media sosialy izany.
Danny Drinkwater, Leicester indray no nahazo ny 'Vahaolana Amin'ny Mangetaheta' Loka nandritry ny fotoanany tao Leicester.
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Fans Favorite
Lasa mpankafy ny mpankafy an'i Chelsea ny rano fisotro. Ny hira izay maneno manodidina ny Stamford Bridge dia toy izao:
"Hay ianao ry Danny Drinkwater, i Chelsea dia tia anao mihoatra noho izay ho fantatra, oh oh oh oh oh".
Izany no hirakoan'ny DRINKWATER.
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Fiainana ny Chelsea Dream
Niteny i Drinkwater fa manararaotra ny vintana ao amin'ny Stamford Bridge izy rehefa avy nandalo fitsaboana amin'ny andron'ny 31st August 2017.
Hoy izy nanampy: 'Faly aho fa mpilalao Chelsea ary tsy afaka miandry hanomboka. Efa ela no nahatongavako teto saingy faly aho ary miandrandra ny fanampiana ny klioba hahazo trobioka bebe kokoa. '
Chelsea dia nanasonia azy satria izy no mpilalao baolina anglisy midadasika miaraka amin'ny teknika mandalo. Izy koa dia nilaina mba hanamafisana ny safidy midina anelanelany. Fifandraisana tsara amin'ny Bakayoko.
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Izay lazainy momba azy
"Mpilalao tena tsara izy. Kitiho ny boaty ary miaro tena tsara. Ny zavatra rehetra ataony dia tena tsara. Raha mila azy i Chelsea, vonona izy, " - Claudio Ranieri, aogositra, 2017.
"Ny zavatra nataony dia hita mazava tsara amin'ny rehetra. Manana vanim-potoana mahafinaritra izy ao anatin'ny ekipa iray izay manana fotoana mahafinaritra, saingy na dia tamin'ny herintaona aza isika dia nahafantatra azy. Ao amin'io sehatra io, ny fifaninanana dia tena henjana, saingy fahafahana ny hitondra azy hiditra ary hahita raha afaka mamerina ny kalitaon'ny baolina azony tamin'ny Leicester izy. "- Roy Hodgson, 17 Martsa 2016.
Ny tantaran'i Danny Drinkwater Childhood Plus Untold: Bakayoko dia tsy misy tahotra
Mpilalao baolina kitra Chelsea Tiemoue Bakayoko dia nanitrikitrika fa tsy niahiahy momba ny fifaninanana azo avy amin'i Danny Drinkwater izy.
Ao amin'ny teniny amin'ny alalany SportsMole..
"Tsy mampatahotra ahy i Danny Drinkwater," hoy ny Frantsay SFR Sport. "Io no fifaninanana. Tsara izany, mieritreritra aho fa mila ny ekipa rehetra izany. Manatsara anao izany. "
Chelsea dia heverina ho maniry ny hanamafy orina ny faritra midadasika amin'ny alàlany Bakayoko ary ny rano fisotro manaraka ny fialan'i Nemanja Matic ho an'i Manchester United.
Dennis Praet tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra
Ricardo Pereira Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts
Harvey Barnes Tantara Ankizy Miampy Untold Biography Facts
Youri Tielemans tantaram-pahaterahana an-tsarimihetsika malaza mbola tsy fantatra
Ny tantaran'i Ayoze Perez Childhood Plus untold momba ny tantaram-piainana
Demarai Grey Childhood Story Plus Untold Biography facts
Harry Kingsley 22 jona 2020 Amin'ny 4:39 hariva
Misaotra anao fa tena nahasoa ity fahitana ity,
Heveriko fa tokony hahatsapa ho miasa ao ianao
Mombamomba ny mpanoratra Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne miora
Harry Maguire ny tantaram-pitiavam-pitiavan'olon-tiana Plus Plus momba ny tantaram-piainana
Ny tantaram-piainan'i Frank Lampard momba ny tantaram-pitiavam-bahaolana tsy hita isa
Tiemoue Bakayoko ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-pitiavana mbola tsy fantatra
Mikel Obi ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa